ZeeKwat | Health Archives - Page3of 199 - ZeeKwat
ခြင်ကိုက်သည့်ယားယံခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေမည့် နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
သဘာဝနည်းဖြင့် သန်းကို ဘယ်လိုသတ်သင့်လဲဆိုတာကို လူတိုင်းသိကြပါသလား?
Home » Gallery » Health (Page 3)
ကင်ဆာရောဂါအတွက် ဆေးတစ်ခွက်အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
<<< Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် >>> ယနေ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဓါတ်စာဖျော်ရည်တစ်မျိုး ခေတ်စားနေပါသည်။ လူအများ စိတ်ဝင်စားလာအောင် စတင်ဖော်ထုတ် ဆော်သြ ခဲ့သူကတော့ ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး အရှင် တိုမီဇာဝ ဖြစ်ပါတယ်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့ ဓါတ်စာဖျော်ရည်ကတော့ “အာလူးစိမ်း“
အိပ်ချိန် နောက်ကျခြင်း၏ ဆိုးရွားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်….
အိပ်ရာဝင် နောက်ကျခြင်းဟာ ဆိုးရွားတဲ့ အကျိုး သက်ရောက်မှု တွေကို ဖြစ်စေတတ် ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြသနာတွေဖြစ်ပေါ်စေရုံမျှ မကဘဲ သင့်ရဲ့နေစဉ် လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကိုလည်း ထိခိုက်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို
ကလေးတွေ ခန္ဓာကိုယ်ဖွံဖြိုးကြီးထွားလာအောင် စားသင့်တဲ့အစားအစာများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
သင့်ကလေးကို ကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်စေတယ်မလား။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအစားအစာတွေကိုကျွေးပေးပါ။ ကလေးက စားချင်သည့်ဖြစ်စေ၊ မစားချင်သည့်ဖြစ်စေ အကျင့်လုပ်ပြီးကျွေးပေးပါ။ အဲ့ဒါမှ သင့်ကလေး ကျန်းမားထွားကြံ့လာမှာပါ။
ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအားဖြစ်စေတာကတော့ နွားနို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်သာခွက်ထက် ပိုညစ်ပတ်တဲ့ ပစ္စည်းများကို လူတိုင်းသိအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်….
လူတို့ နေ့စဉ်ထိတွေ့ အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ အိမ်သာခွက်ထက် ပိုညစ်ပတ်ပြီး ပိုးမွှားတွေကပ်နေတတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုပစ္စည်းတွေဟာ အိမ်သာခွက်ထက်ပိုညစ်ပတ် လိမ့်မယ် လို့ တွေးမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကတော့….
သစ်တော်သီး စားပီးဝိတ်လျော့လိုက်ကြရအောင်နည်းလမ်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
အသီးအနှံတွေစားသုံးခြင်းက အသားတွေစားသုံးခြင်းထက် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသီးတစ်လုံးစားသုံးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေတယ်လို့ တော်တော်များများသိထားကြမှာပါ။ ပန်းသီးက အလေးချိန် လျော့ကျစေသလို သစ်တော်သီးကလည်း အလေးချိန်လျော့ကျစေဖို့ အပြည့်အ၀ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့
ချောမွေ့ညက်ညောတဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ် ခြင်းရရှိဖို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးသင့်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
သန့်ရှင်း ပြေပြစ်တဲ့ မျက်နှာ အသွင်အပြင်ဖြစ်စေဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်အဆင့်ဆင့်တွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အမျိုးသား အများစုဟာ မုတ်ဆိတ်မွေး တွေ မှားယွင်းစွာ ရိတ်နေကြပြီး အကောင်းဆုံးအဆင့်ထိ မရောက်နိုင်ကြတဲ့သူက များပါတယ်။ ဒါဟာ
နဂိုရှိရင်းစွဲ အသားအရောင် ထက် ပိုပြီး ဖြူစေလာနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
ဒီပို့စ်လေးဟာ သူများထက် အသားညို လို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေအတွက် တကယ်ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့် နည်းလေးပါ။တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီး အသားဖြူဆေး ၊ လိုးရှင်း တွေ မျိုးစုံပ်ါနေပေမယ့်လည်း မသိနိုင်တဲ့ side
ဆီချိုရောဂါသည်များအတွက် ကျန်းမာစေမည့် အမူအကျင့်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
၁။ အချိန်မှန်စားပါ။ စားချိန်ကျော်လွန်မှ စားခြင်းကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
၂။ လမ်းလျှောက်ပြီး၊ ပင်ပန်းပြီး ချက်ချင်း မ…စားပါနှင့်။
၃။ အချိုပေါ့သော အစားအစာများကိုသာ စားသုံးပါ။
အမျိုးသမီးများ နေ့စဉ် စားသုံးသင့်သော အစားအစာ (၅) မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
လိမ္မော်သီး တစ်လုံးမှာ ပါတဲ့ ဗီတာမင်စီဓာတ်ထက် သင်္ဘောသီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမင်စီက နှစ်ဆ ပိုများပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရောဂါအတွက် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အမေရိကန် ဆန်ဖရန်စစ္စကို တက္ကသိုလ် သိပ္ပံပညာရှင်များက
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေသော အရာများကို လူတိုင်းသိအောင်မျှဝေလိုက်ပါတယ်….
<<< Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် >>> ကင်ဆာရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အစားအသောက်၊ အသုံးအဆောင်များကို သိရှိထားပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ကြစေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
အသုပ်ဆိုင်၊ အကြော်ဆိုင်၊ အကင်ဆိုင်နဲ့ တုတ်ထိုးဆိုင်တွေမှာ နေ့စဉ် လူတွေ မြိန်ရည်ယှက်ရည် စားနေကြတာကတော့ အန္တရာယ်ရှိ